म केवल लेखक त सजिलै हुनसक्छु तर म लेखक हैन । म पटकथा लेखक हुँ, जुन आधाआधी फिल्ममेकर पनि हो । तर पटकथा लेखन कला हैन, किनभने यसले कलाको रुपमा काम गर्दैन बरु अरुलाई कला कर्मका लागि आमन्त्रण गर्छ ।’
जिन्दगीको सपना देख्ने उमेरमै उनले आँखा गुमाइन् । चिकित्सकको गलत सल्लाहले संसार हेर्नबाट वञ्चित भए पनि उनले आफ्नो हौसला भने जारी राखिन् ।
हल थप्दै ‘जय शम्भु’
शुक्रबारदेखि प्रदर्शनरत ‘जय शम्भु’ को प्रारम्भिक व्यापार ‘सुखद’ भएपछि हलमा सो थपेको छ ।
आफूभन्दा ११ वर्ष कान्छा निकसँग बलिउड अभिनेत्री प्रियंकाको इन्गेजमेन्ट
बलिउड/हलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले इन्गेजमेन्ट गरेकी छन् । आफूभन्दा ११ वर्ष कान्छा अमेरिकी गायक निक जोनससँग चोपडाले शनिबार बिहान इन्गेजमेन्ट गरेकी हुन् ।
पहिलो नम्बरमा ‘घामपानी’
बिहीबार युटयुबमा अपलोड गरिएको फिल्म ‘घामपानी’ शनिबारसम्म पूरापूर ‘हिट’ भयो । भ्युज बढेर युटयुबमा नेपाल ट्रेडिङको पहिलो नम्बरमा उक्लिएपछि निर्देशक दीपेन्द्र लामा, अभिनेत्री केकी अधिकारीलगायतले फेसबुकमा स्टाटस नै लेखे ।
६ वर्षीय बालक आयुव सेनको मुख्य भूमिका रहेको बालमनोविज्ञानमा आधारित ‘मेरी मामु’ को ट्रेलरमा पनि आयुव हाबी देखिएका छन् ।
युटयुब, स्पोटीफाई जस्ता न्यु मिडियाको आगमनसँगै विश्व सांगीतिक वृत्तमा अमेरिकी म्युजिकको एकछत्र आधिपत्य कमजोर बन्दै गएको छ ।
नजिकिँदै गरेको तीज पर्वलाई लक्षित गरेर 'माइत जाने हो...' म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।
पेन ड्राइभ कन्सर्ट !
अधिकांश नेपाली गायकगायिका सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि एक्लै स्टेजमा पुग्छन् । तिनका साथमा न वाद्यवादक हुन्छन्, न कुनै वाद्ययन्त्र । हुन्छ त केवल पेन ड्राइभ ! त्यो ड्राइभ प्राविधिकलाई थमाएपछि उनीहरू गाउन तम्तयार हुँदै भन्छन्, ‘ट्रयाक प्लिज ।’
‘दाल भात तरकारी’ बन्ने
गत वर्ष ‘शत्रु गते’ मार्फत फिल्म निर्माणमा फर्किएको मह सञ्चारले फेरि कमेडी जानरामै अर्को फिल्म बनाउने भएको छ ।
हलमा ‘मिस्टर भर्जिन’
यौन मनोविज्ञानमा आधारित फिल्म नेपालमा खासै बनेको पाइँदैन । अझै यस्ता विषयमा खुलेर बहस भएकै पनि पाइँदैन । शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘मिस्टर भर्जिन’ ले भने यसै विषयलाई उठान गरेको छ ।
‘रोजी’ फेरिएर ‘रोज’
प्रदर्शनमा आउन तीन साता बाँकी रहँदा ‘रोजी’ फिल्मको नाम ‘रोज’ मा परिवर्तन भएको छ ।